Global Voices teny Malagasy · 14 Jona 2019
14 Jona 2019
Tantara tamin'ny 14 Jona 2019
Fampidirana ho amin'ny Audacity mba handraketana sy hikiràna feo
Mediam-bahoaka14 Jona 2019
Ho an'ireo liana hamorona ny fandaharany manokana na handahatra mozika ho an'ny GV Radio, ity taridàlana tsotra avy amin'ny Bokikely FLOSS ity dia afaka hanampy anareo hanomboka. Omen'ilay taridàlana ny topimaso ankapobeny momba ny fampiasàna ilay rindrambaiko maimaimpoana natao handraketana sy hikiràna feo. Azonareo trohana ato ilay rindrambaiko ary afaka...
Torohevitra isankerinandro ho anao momba ny Fiarovana : Tenimiafina!
Torolalana14 Jona 2019
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny May 2015) Nihisatra aho teo, araka izany dia miaraka amin'ny fialantsiny no andefasako ho anareo ireto torohevitra isankerinandro momba ny fiarovana ireto : Torohevitra hialàna amin'ny fanarahamaso ety anaty aterineto Fampiasàna mpitantana tenimiafina mba ho tsara aro ety anaty aterineto Arovy tsy ho tratran'ireo mpijirika...
Taratasim-pifandraisan'ny mpandika ES-EN : Kambana mpandika, ny Lalàmpanorenana Meksikàna ary zavatra hafa maro!
Dika14 Jona 2019
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2015) Mirary Alatsinany finaritra ho an'ny tsirairay! Manantena aho fa samy niaina faran'ny herinandro lafatra daholo isika ary tsy mahandry ery hiaina herinandro iray tsara sy mamokatra! Ary moa va misy fomba tsara hamokarana mihoatra noho ny fahazoana vaovao vitsivitsy sy mampientanentana momba ny...
vondrom-piarahamonina14 Jona 2019
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2015) Noraisin'ny Los Angeles Times hiasa ny mpanoratra iray antsoina hoe Dexter Thomas mba hanao tatitra fandrakofana ny Black Twitter sy ireo vondrom-piarahamonina hafa ety anaty tambajotra. Nantsafain'ny Columbia Journalism Review i Thomas a anatin'ity lahatsoratra ity, izay mifantoka voalohany indrindra—ary angamba efa nampoizina...
Azia Atsinanana14 Jona 2019
Antsafa14 Jona 2019
Andao hofantarina bebe kokoa ny momba an'i G̓vu̓í (Rory Housty), hampiatrano ny kaonty Twitter @NativeLangsTech mandritra ny herinandron'ny 13-19 jona 2019. Hozarainy amintsika ny fomba fijeriny ny fiteny Haiɫzaqvḷa.
Ny nampianarin'ny GV ny Tanavo iray (izaho)
Manampy hahita zavatra mahaliana sy mendrika ho vakiana ny GV
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2015) Iray fanampiny indray ao anaty antontanisa Hifoha afaka ora vitsy i Dhaka. Toy ireo Alahady hafa ihany, hanomboka miaraka amin'ny fo efa mahazatra sy aminà fifamoivoizana mitohana be ny fiainana. Miaraka amin'ny tahotra toy ny teo ihany, tsy an-kiteny, tsy misy zavatra vaovao...
Ireo toerana nohamaivanina ao Londona: Aiza no haleha, inona no hojerena – Avy amin'ireo mpandray anjara ato amin'ny Global Voices
Telo na efatra no sosokevitra homenay anareo, ...midadasika be ny safidy raha resaka fisotroana kafe sy trano fisakafoanana.
Vao avy nisedra fahasahiranana tamin'ny fiadidiana (governemanta) tao an-toerana ny tanàna kely any Januária, avaratry ny fanjakana Breziliana ao Minas Gerais. Nifandimbiasana ben'ny tanàna miisa fito ity tanàna ity nandritra ny enina taona. Betsaka amin'ireo ben'ny tanàna ireo anefa no voaisotra tamin'ny asany noho ny fanitsakitsahan-dalàna,